हिमालयन बैंकका सिईओ राणा भन्छन् ‘बाफियामा सिईओको कार्यकाल र उमेर लिमिट राख्नुहुन्न’ « Artha Path
हिमालयन बैंकका सिईओ राणा भन्छन् ‘बाफियामा सिईओको कार्यकाल र उमेर लिमिट राख्नुहुन्न’
अशोक शमसेर राणा, सिईओ हिमालयन बैंक लि
जुन बैंकको ७९ सिसिडि छ, उसैले लोनको एड गरेको छ, यस्तोलाई के म्यानेजमेन्ट भन्ने ?
हाम्रो पनि लगानी छ, म सिईओबाट रिटार्यर भएर वोर्डमा बस्न नपाउने ?
कम्पिटीसनको बजारमा हिमालयन बैंक एक्लै हिड्छ ?
किन नसक्नु यति बर्ष भईसक्यो । मज्जालै सकिन्छ ।
कम्पिटिसन त बढ्दो छ त ? अरु बैंक ठूलो भैसक्यो ?
ठूलो भएर के भयो त । त्यो राम्रो हुनु पर्यो नी । ठूलो भन्दैमा राम्रो हुनुपर्यो । आफ्नो ईन्टर्नल म्यानेजमेन्ट राम्रो हुनुपर्यो । रिस्क म्यानेज हुनुपर्यो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसंग मर्ज हुन्छ ?
बाहिर चर्चामा आएको जस्तो इन्भेष्टमेन्ट बैंकसंग एक रुपैयाँ पनि क्रस होल्डीङ छैन । मर्जरको यो हल्ला मात्रै हो । हविव बैंकको एक्जिट भैसकेपछि अर्को बैंक ज्वाइन भेञ्चर नआउनञ्जेलसम्म मर्जरको बारेमा कुनै ठिसिजन हुँदैन । यो हुँदा हुँदै मान्छेले किन मर्जको कुरा गरिरहेका हुन । हामीले धेरै पटक न्यूज पनि दिईसक्यौँ, हविल बैंक एक्जिट गरेर एकचोटी एक्जिट गरेर सिडिसी बैंक साझेदारको रुपमा आउन खोजीरहेको छ । त्यो नटुंगीकन कसरी हामी मर्ज गर्न सक्छौँ ?
सिडिसी कहिलेसम्म आउँछ ?
त्यो थाहा भएन मलाई । हविव एक्जीट भएपछि प्रोसेस सुरु हुन्छ ।
कुनै प्रक्रिया शुरु भएन ?
प्रक्रिया शुरु भएको छ । बिग्रेको थियो फेरी सुधार्न खोजिरहेका छाँै ।
जुन हिमालयन बैंकको बोर्ड संरचना परिवर्तन भयो त्यसले बजारमा एक किसिमको मर्जरको वातावरण बनेको छ भन्ने आएको छ नी ?
छैन । किन भन्दा तपाईले हेर्नुभयो भने सञ्चय कोषको सिइओ चाँहि अध्यक्ष भएका छन् । पाए भने सञ्चय कोषले जति पनि पैसा हाल्न सक्छ । किन मर्ज गर्नुपर्यो । क्यापिटल चाहिएको होईन त हामीलाई । हामीले त राईट ईस्यूबाट जान सक्छौँ । हामीलाई राष्ट्र बैंकले दिएको २ ओटा निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । एउटा ५० प्रतिशत पब्लीककोमा छ, त्यो ३० प्रतिशत बनाउनुपर्यो । त्यो हाम्रो यो आर्थिक बर्षभित्र हुन्छ । त्यसपछि हामी ३० प्रतिशत पव्लिकमा हुन्छौँ । अरु बैंक जस्तो हुन्छ अनि । त्यो भन्दा अगाडी मर्ज गर्न पनि मिल्दैन । किनभने एउटा ५० प्रतिशत मात्र भएकाले त्यो मान्दैन । हिमालयन बैंक कस्तो छ भने हाम्रो डाटा हेर्ने हो भने अरु टाईपको बैंक होईन । जथाभावी साखाहरु खोलेर मार्केट लिन खाजेको होईन । हाम्रो प्रोफिट राम्रो छ ।
ठूलो बन्न जरुरी छैन ?
छैन । किन ठूलो बन्नु ? ठूलो भन्या कति हो ?
मर्ज भएर ठूलो हुँदैन ?
ठूलो भन्या कति हो ? हाम्रो अहिले १३ अर्व क्यापिटल नै छ नि । १४ पुगिसक्यो की क्या हो । कति हुनुपर्ने हो २०, ३० या ४० । त्यो केहि आईडिया भयो भने हुन्थ्यो नि । ठूलो भन्ने त्यो साईज नै डिफाईन नगरी हुँदैन ।
नेपालमा कमर्सियल बैंकको धेरै भयो भन्छन नी ?
त्यो त हाम्रो समस्या होईन नी । त्यो सेन्ट्रल बैंकको समस्या हो । त्यतिका लाईसेन्स दिएपछि हामीलाई आएर पेल्ने कुरा त भएन नी । लाईसेन्स दिने वेलामा दियो । अव समस्याको समाधान गर्नलाई हामीलाई पेल्ने । हामी त पुरानो बैंक हो नि ।
बैंक धेरै भएको मान्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ, जुन उहाँहरुले पोलिटिकल प्रोसेसवाट दिएको थियो लाईसेन्स छ सातवटा बैंकलाई । पहिला तिनिहरुको मिस्टेकले सुधार गर्नुपर्यो । तिनिहरुलाई मर्ज गराएपछि अनि हामी कहाँ आयो भने हुन्थ्यो । नत्र किन स्टाण्र्डलाई, नविललाई सोध्ने । त मर्ज गर मर्ज गर भनेर । नेपालमा छ सात बैंक भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मेरो भनाई जहिले पनि यहि हो । यति मात्र हुने हो भने जति पनि पुग्छ ।
धेरै हुँदाको कम्पिटिसन त बढि छैन ?
कम्पिटिसन भएको छैन । खाली सिस्टमेटीक रिस्क हुन सक्छ । अहिले पनि बैंकहरुले कोर डिपोजिट पनि १० देखी १५ प्रतिशतसम्म राखेको छ । त्यो घटाउँ भन्दाखेरी माईनस छैन । सेभिङ अकाउन्ट बढाएको छ किन भन्दा कोर डिपोजिट ट्रयाक गर्नका लागि रिस्की विहेवियर भयो ।
रिस्की विहेवियर नहोलाकी भनेर । भारतको यस बैंक हेर्नुहोस् रङ सेक्टरमा, रियल स्टेट, नन बैंक फाईनान्स लाई लोन धेरै दियो । रिस्की सेन्टरमा गयो नि त । त्यो हुन्छ ।
नेपालमा त्यो समस्या आउन सक्छ ?
रियल स्टेटलाई त डा. युवराज खतिवडाले गभर्नर हुँदा नै रोकिदए । नत्र बैंकहरु सबै डुब्थे होला, रियल स्टेटमा धमाधम गईरहेका थिए । अहिले त लिमिट गर्यो नी । २५ प्रतिशत भन्दा बढ्ता पाउँदैन । २५ प्रतिशत पुग्न लाएको वेलामा राष्ट्र बैंकले कडा गर्छ । त्यहि भएर हाम्रो त्यस्तो रिस्क छैन ।
अव देखिने रिस्कहरु के छन ?
अहिले त रिस्क त्यँहि छ नि । कोरोना भाईरसले इकोनोमिक तल गयो भने ईण्डस्ट्रीएल सेक्टरका लोन तिर्न सकिन्न, होटेलले तिर्न सक्दैन । सबैजनालाई रिस्क भयो नि ।
हिमालयन बैंकले मर्जरको बारेमा सोचेको छैन ?
बाहिर सेयर प्राइस बढाउने हल्ला मात्रै हो ?
अव हिमालयन बेंक एग्रेसिभ जान्छ ?
हामी एग्रेसिभ जाने की नजाने भन्नेमा हाम्रो पार्टनर हविवको एक्जिटलाई कुरीरहेका छौँ । त्यसपछि नयाँ सेयर धनीको रुपमा सिसिडी बैंक आउँछ ।
अहिले लगानी गर्ने फण्ड टन्नै छ नि बैंकमा ?
छैन । हाम्रो एभ्रेज सिसीडि ७७ प्रतिसत छ । त्यो त राम्रो होईन ।
लोनको डिमाण्ड कम भईरहेको हो ?
त्यो पनि भन्छ तर तपाई हेर्नुहोस जुन बैंकको ७९ प्रतिशत सिसिडि रेसियो छ लोनको एड गरेको छ । यस्तोलाई के म्यानेजमेन्ट भन्ने ?
संसदमा छलफलका लागी पेश भएको बाफियाको सुझाव के छ ?
बाफियाको चाँहि यो कार्यकाल अवधी र उमेर लिमिट राख्नुहुन्न भन्ने हाम्रो सुझाव हो । हामी प्राईभेट सेक्टरको हो । नेपाल सरकारको चाहि बैंकहरुमा लागु गरेमा त्यो नेपाल सरकारको कुरा भयो । तर गभर्मेन्टको र प्राईभेट सेक्टरको लागु हुनुपर्ने भन्ने त्यो राम्रो कुरा होईन । राष्ट्र बैंकको कुनै बैंकहरुसंग अफ्ठ्यारो छ भने बोलाएर कुरा गर्नु पर्यो तर ईण्डस्ट्रीलाई अषर पु¥याउनेगरी ल्याउनु भएन ।
हुबहु पास हुने कुरा छ त ?
मैले सुनेको हुँदैन । धेरै विरोध छ । रुलिङ पार्टीमा पनि त्यस्तो सहमती छैन । कांग्रेसका कतिपय सांसदहरुले विरोध जनाइसकेका छन । हेरौँ के हुन्छ ।
एउटै व्यक्ति लामो समय सिईओमा बस्दा नेगेटिभ ईम्प्याक्ट पर्छ ?
मलाई त लाग्दैन । कहि कतै भएको छ र ? अमेरिकामा हेर्ने हो भने जेभी डाईमण्ड त्यत्रो कम्पनी चलाईरहेको छ । तिनिहरुको विजनेश त टेस्ट स्टोरीमा देखाउँछ । नेपालमा माात्रै होईन त नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेजस्तै हुन्छ ।
अन्य देशमा छैन यस्तो ?
छैन छैन । दिस ईज द प्राईभेट सेक्टर । यहाँ त डिभोजिटरको पैसा भएको हुनाले यो त पब्लिकको नै हो भन्ने कुरा । रेगुलेटर राष्ट्र बैंकको केहि राम्रो भएन भने कारर्वाही गर्नु पर्यो नि । यस्तो एजमा रेष्ट्रिक्सेन लगाएर भएन नी ।
तपाईको कार्यकाल रिन्यू हुन्छ ?
त्यो त हेर्नुपर्छ । वोर्डको कुरा हो । द्याट ईज नट ईस्यू ईस्यू ईज द्याट । हाम्रो पनि लगानी छ, म सिईओबाट रिटार्यर भएर वोर्डमा बस्न नपाउने ? बस्न नपाउने भएपछि राम्रो भएन नि ।
सिईओमा दोहारिने ईच्छा छ ?
अहिले त कस्तो लाग्छ भने सिडिसी आउने र हविब बैंक जाने त्यसमा ट्रान्जिसन पिरियड त गर्नुप्यो नि । स्वाट्टै छोड्नु भएन नि । यहाँ हाम्रो कलाम्विङ त कस्तो थियो भने सिडिसी आउँछ एउटा ट्रान्जिसन पिरियड हेरेर अनि छोड्ने भन्ने कुरा हो । तर अफसोच हाम्रो पुरानो वोर्डले सिडिसी बैंकलाई आउन रोकिदियो । रोकेर राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेर नयाँ बोर्ड खडा गरेर अगाडी बढोस भनेर गरिराखेको छ । त्यो काम बाँकी छ ।
हिमालयन बैंक बजारमा कसरी अगाडी बढ्छ ?
हामी हाम्रो आईटीको एक दुईवटा इस्यूहरु डिल गरिरहेका छौँ । हाम्रो ईन्टरर्नल कसरी बलियो वा व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ । हामी पाँचवटा ब्रान्चहरु खोल्ने तयारीमा छौँ । तर हामी चाँहि ३ सय ब्रान्च खोल्ने योजना छैन । बरु हामीले राष्ट्र बैंकलाई ब्रान्च खोल्दाखेरी स्विकृती लिन नपोरस, जानकारी मात्र दिए पुगोस भन्ने आग्रह छ । काठमाडौं भित्र नै कति ठाउँमा ब्रान्च नै छैन । गाउँवाट शहरमा आएको छ, खुल्नुपर्ने सहरमा होइन त ।
नोटलाई जतनसाथ प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जतनसाथ प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक
अवैध रुपमा भारत लैजाँदै गरेको हरियो केराउ बरामद
काठमाडौँ । अवैध रुपमा नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गरेको करिब २७ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको२ सय